Global Voices teny Malagasy » Sokafy Amin’Ireto Horonantsary 16 Avy Amin’ny Firenena Maneran-tany Ireto Ny Tontolon’ny Sarimihetsika Fijerinao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Febroary 2016 13:30 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Amerika Latina, Azia Afovoany sy Kaokazy, Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Ny Tetezana - The Bridge
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr weegeebored. CC BY-ND 2.0
Nangonina sy naparitak'iTaisa Sganzerla , L. Finch , Georgia Popplewell  ary ny Global Voices community  ity lahatsoratra ity.
Misy tontolonà horonantsary lehibe sy midadasika any ho any, fa matetika isika no tsy mahita fa misy fahasamihafana tsy aseho any amin'ny trano fijerentsika sarimihetsika eo an-toerana, sady mety manahirana kely ny miala amin'ny mahazatra sy mikaroka samirery ny fidadasiky ny tontolon'ny sarimihetsika .
Noho izany dia nataonay ho anao ity asa ity. Nanangona ifotony ireo tolotrà sarimihetsika avy amin'ny fikambanan'ny mpanoratra, ny tonian-dahatsoratra ary ireo mpandika teny maneran-tanin'ny Global Voices izahay, ary nahazo listra sarimihetsika 16 avy aminà faritra dimy samy hafa, ilaharan'ny taloha sy ny vaovao, ny malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny tena mbola tsy fantatra mihitsy. .
Fomba iray tena tsara ahafahana manao topimaso toerana iray na fotoana iray fantampantatra ny sarimihetsika. Vonona ny hitety avy eo ambony sezalava ? Vakio ary.
Manila Eo Ambany Vahohon'ny Hazavana (Filipina, 1975)
Dikasary tamin'ny Manila Eo ambany Vahohon'ny Hazavana.
Sarimihetsika Filipiana tena mahazatra izay hita matetika amin'ny lisitry ny horonantsary tsara indrindra maneran-tany, mitantara ny fahantrana sy ny hadisoam-panantenana tamin'ny andron'ny jadon'i Ferdinand Marcos tamin'ny 1970 ilay horonantsarin'ny tale Lino Brocas. Hita ao amin'ny Youtube amin'ny fiteny Tagalog ny sombiny. (Natolotry ny mpanoratra Karlo Mongaya )
Ho an'i Singapore, Am-Pitiavana (Singapore, 2013)
Dikasary tamin'ny Ho an'i Singapore, Am-Pitiavana
Ity horonantsary fanadihadiana ity , izay voarara tany Singapore, dia milaza ny mombamomba ireo sivy nandeha sesitany politilka izay nandositra ny nosy fireneny tamin'ny taona 1960 nandritra ny famoretana nataon'i Lee Kuan Yew tamin'ireo mpitolona mafana fo avy amin'ny hery ankavia , ary noho ny tahotra ny fanenjehana dia tsy niverina intsony. Lazain'ny mpitondra Singaporeana ankehitriny fa “tantara namboarina sy tsy marina ny fomba nandaozana [ny tsitairay] an'i Singapore”  no tantarain'ilay horonantsary. Ao amin'ny Vimeo ny sombin-tantara, ary azo jerena manontolo ny horonantsary rehefa mandoa vola. (Natolotry ny mpanoratra Kristen Han )
Siti (Indonezia, 2014)
Dikasary tamin'ny Siti.
Nahazo ny lokan'ny horonantsary tsara indrindra tany amin'ny Fetiben'ny horonantsary Indoneziana sy ny Fanoratana Script tsara indrindra tany amin'ny fetibe iraisam-pirenenan'ny horonantsary tao Shangai. Siti , tantaran'ireo tolon'ny vehivavy tanora iray, izay mba hamelomana ny fianakaviany, dia miasa mampandroso vahiny ao aminà karaoke ao amin'ny toerana iray mafana fandehanan'ny mpizahatanin'ny torapasik'i Parangtritis any Jogjakarta. Ao amin'ny Youtube miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny anglisy no ahitana ny sombn-tantara. (Natolotry ny mpanoratra Juliana Harsianti )
Lehilahy Mahafatifaty (Indonezia, 2011)
Dikasary tamin'ny Lehilahy Mahafatifaty.
Vokatra indoneziana anankiray momba ny fifandraisan'ny fianakaviana, manaraka ny dianà vehivavy mpivavaka iray izay mahita ny rainy efa tsy hitany elabe lasa vavilahy mpivarotena any Jakarta ity horonantsary ity.  Ohatra mahalan'ny sarimihetsika any Azia Atsimo Atsinana izay mifantoka amin'ny olan'ny LGBT ity sarimihetsika izay lalaovin'ilay mpilalao sarimihetsika nahazo loka Donny Damara ity. Hita ao amin'ny YouTube ny sombin-tantara amin'ny teny indoneziana. (Natolotry ny mpanoratra Juke Carolina )
Dikasary tamin'ny La Operación
Horonantsary fanadihadiana fohy  manasongadina ny politikan'i Etazonia momba ny fampamombàna an-tery natao tany Porto Rico tamin'ny taona 1950 sy 60. Maherin'ny ampahatelon'ny vehivavy teo amin'ny firenena no efa tsy miteraka intsony. Nolavin'ny hopitaly ny handray ireo vehivavy bevohoka anatty fahasalamana tsara ka tonga hiteraka raha tsy manaiky ny tsy hiteraka intsony izy rehefa avy eo. (Natolotry ny tonian-dahatsoratra Firuzeh Shokooh Vale  amin'ny teny Espaniola) .
Nosin'ireo Voninkazo (Brezila, 1989)
Dikasary tamin'ny Nosin'ireo Voninkazo
Tantara iray tena mahazatra : alefa foana ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa any Brezila tany amin'ny taona 1990 ity horonantsary fohy, 13 minitra  nahazo loka ity. Miaraka amin'ny feo lafika feno eso sy fanoharana hafahafa, mitantara ny làlana rehetra alehanà voatabia lò iray nanomboka tany amin'ny toeram-pambolena kely ka hatrany amin'ny toerana fanariam-pako izay ivelomanà vondrom-pianakaviana. (Natolotry ny mpanoratra Fabiano Post )
Lalànan'i Heroda (Meksika, 1999)
Dikasary tamin'ny Lalànan'i Heroda
Tantara Meksikana mampihomehy  mitantara tantaranà mpiandry tanàna lasa ben'ny tanàna tany afovoan'ny tany efitr'i Meksika. Niha-fantany tsikelikely hoe hatraiza marina no hitondran'ilay fahefana vaovao sy ny kolikoly azy. Hitan'ny sasany ho toy ny fototra mifehy ny fiainana ara-politika any Meksika ilay lohateny : ataovy aminy izany mialoha ny anaovany izany aminao. Sombin-tantara ao amin'ny YouTube  amin'ny teny Espaniola. ( Natolotry ny mpanoratra sady mpikambana amin'ny ekipan'ny haino aman-jery sosialy Elizabeth Rivera )
Magallanes (Però, 2015)
Dikasary tamin'ny Magallanes
Horonantsary  nahazo ny loka Goya Espaniola tamin'ity taona ity, tantara manaraka ny dian'ilay mpiady tranainy lasa mpitondra fiarakaretsaka sy ireo tolony amin'ny fahatsiarovana ny fanapariahana (asa miaramila) tany amin'ny faritr'i Ayacucho atsimon'i Però, toeram-pamaharan'ny mpiady anaty akata Maoist tamin'ny andron'ny fikomiana Làlan'ny hazavana. Sombin-tantara ao amin'ny YouTube  miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny Anglisy. (Natolotry ny mpanoratra sady mpandika teny Gabriela Garcia Calderón )
Ilay Elanelan-davitra (Venezoela, 2014)
Dikasary tamin'ny Ilay Elanelan-davitra
Tantaran- jazalahy kely iray 10 taona, mampihetsi-po, izay ho any La Gran Sabana mba hihaona amin'ny renibeny sy hamerina indray ny fifamatoram-pihavanana. Mitondra ireo mpijery avy amin'ny tontolo iainana be tabataban'i Caracas ho amin'ny tontolo ambanivohitry ny fanjakana Bolivar Venezoeliana, ny làlana rehetra any an-tampon-tendrombohitr'i Roraima ity horonantsary eny an-dàlana ity. Azo jerena ao amin'ny Vimeo  miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny anglisy ny sombin-tantara. ( Natolotry ny mpanoratra Marianne Díaz )
Dia iray ho any Karabakh (Jeorjia, 2005)
Dikasary tamin'ny Dia iray Ho Any Karabakh
Andian-tovolahy Zeorziana namakivaky ny sisin-tany Nagorno-Karabakh – faritra mampiady eo anelanelan'i Armenia sy Azerbaijan hatramin'ny naharava ny Firaisana Sovietika- mikatsaka hividy zava-mahadomelina, saingy voasambotry ny manam-pahefana tao an-toerana nony farany. (Natolotry ny mpanoratra Mirian Jugheli )
Ny Alok'ireo Razambe Adino (Okraina, 1965)
Dikasary tamin'ny Alok'Ireo Razambe Adino
Heverina ho fototry ny fanaovana sarimihetsika any Okraina, mitrandraka lalina ny kolontsaina Hutsuls,  vondronà foko manana ny fiteniny manokana avy any amin'ny tendrombohitr'i Carpathian ilay horonantsary. ( Natolotry ny tonian-dahatsoratry ny RuNet Echo Tetyana Lokot )
Ilay kapotsaka (Azerbaijan, 1988)
Dikasary tamin'ny Ilay Kapotsaka
Raha nankafy ny Leviathan  nahazo ny Oscar (2013) ianao ary te-hahalala bebe kokoa an'i Rosia Sovietika, aza adino ny The Scoundrel (Yaramaz  amin'ny teny Azerbaijana), tantara hatsikana miady amin'ny kolikoly tamin'ny andron'ny fitondrana sovietika tany Azerbaijan. (Natolotry ny mpanoratra Arzu Geybullahyeva )
Ireo Tantaran'ny Fiainanay (Kenya, 2014)
Dikasary tamin'ny Tantaran'ny Fiainanay
Mirakitra tantara dimy fohy mitrandraka ny olan'ny LGBT ao amin'ny firenena ity sarimihetsika novokarin'ny firaisan'ny mpanakanto any Nairobi ity. Voarara tany an-toerana ity horonantsary ity noho ny lalàna amin'ny ady amin'ny pelaka  any Kenia. Hita ao amin'ny Youtube amin'ny teny Anglisy ny sombiny. (Natolotry ny mpanoratra Pernille Baerendtsein )
Dikasary tamin'ny Tabataba
“Hotakotaka” no dikan'io amin'ny teny Malagasy, saingy teny itantarana ny zava-nisy tamin'ny fikomian'ny Malagasy tamin'ny 1947 ihany koa io teny io. Mitantara ny ady ho an'ny fahaleovantena tamin'ny fanjanahan'ny frantsay tamin'izany fotoana izany, izay nataon'ny Malagasy tao aminà tanàna kely iray ity sarimihetsika  ity. ( Nanolotra : Lova Rakotomalala )
Tsy Misy Mahalala Ny Momba Ireo Saka Persiana (Iran, 2009)
Dikasary tamin'ny Tsy misy Mahalala Ny Momba Ireo Saka Persiana
Amin'ny alàlan'ny mason'ireto mpihira anankiroa te-halaza any Teheran ireto no anoloran'ny horonantsary topi-mason'ny any anatin'ny sehatry ny hira any Iràna ho an'ny mpijery. Ny feon-kirany dia mitovitovy amin'ny an'ireo mpanatalenta Iraniana malaza, toy ny mpanao rap Hichkas sy ny tarika mpanao rock Yellow Dog , izay nisy namono tany New York ny mpihirany sy ny mpively amponga maro anaka tamin'ny 2009. Hita ao amin'ny YouTube  miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny Anglisy ny Sombiny. ( Natolotr'i Mahsa Alimardani  ny tonian-dahatsoratra any Iran )
Ho Aiza Isika Izao ? (Libanona, 2011)
Dikasary tamin'ny Ho aiza isika izao ?
Ity sarimihetsika  ity dia mitondra ny mpijery ho any amin'ny sisintanin'i Libanona tamin'ny taona 1970, raha efa ho mby amin'ny ady an-trano ny firenena. Rehefa nanomboka nisy ny disadisa teo amin'ny Kristiana sy ny Silamo tao aminà tanàna kely iray, dia nisy vondrom-behivavy niray hina mba hisakanana lehilahy tsy hiady. Ao amin'ny YouTube no ahitàna ny sombin-tantara miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny anglisy. ( Natolotry ny Mpiara-miasa Mohammed Najeen )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/09/78545/
 tena mahazatra : http://www.imdb.com/title/tt0073363/
 sombiny. : https://www.youtube.com/watch?v=qwLYo04lD7I
 Ity horonantsary fanadihadiana ity: http://www.imdb.com/title/tt3461274/?ref_=fn_al_tt_1
 Lee Kuan Yew tamin'ireo mpitolona mafana fo avy amin'ny hery ankavia: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Coldstore
 “tantara namboarina sy tsy marina ny fomba nandaozana [ny tsitairay] an'i Singapore”: http://www.independent.co.uk/voices/comment/have-you-heard-about-the-film-singapore-has-banned-its-people-from-watching-well-you-have-now-9736530.html
 ity horonantsary ity.: http://www.imdb.com/title/tt2085865/?ref_=fn_al_tt_1
 Hita ao amin'ny YouTube ny sombin-tantara : https://www.youtube.com/watch?v=Kf4PyGdP5NA
 Horonantsary fanadihadiana fohy: http://www.imdb.com/title/tt2955240/?ref_=fn_al_tt_1
 horonantsary fohy, 13 minitra: http://www.imdb.com/title/tt0097564/?ref_=fn_al_tt_1
 Tantara Meksikana mampihomehy: http://www.imdb.com/title/tt0221344/?ref_=fn_al_tt_1
 Sombin-tantara ao amin'ny YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qx7Ylt-Bwwc
 Sombin-tantara ao amin'ny YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IM4JxNQG0Wk
 Andian-tovolahy Zeorziana : http://www.imdb.com/title/tt0480702/?ref_=fn_al_tt_1
 sarimihetsika : http://www.imdb.com/title/tt3973612/?ref_=fn_al_tt_1
 lalàna amin'ny ady amin'ny pelaka: https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Kenya
 zava-nisy tamin'ny fikomian'ny Malagasy tamin'ny 1947 : https://en.wikipedia.org/wiki/Malagasy_Uprising
 horonantsary : http://www.imdb.com/title/tt1426378/?ref_=fn_al_tt_1
 namono tany New York : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yellow_Dogs
 Ao amin'ny YouTube no ahitàna ny sombin-tantara : https://www.youtube.com/watch?v=Hf1sW3YI1GE